Furiinka – Depression Clinic | Depression Treatment
Furiinka maxaa keena iyo sidee looga hortagi karaa.
Sanooyinkaan dambe oo aad u tira batay furiinka ayaa waxaa leys waydiinaya
su’aasha ah maxaa keenay furiinkaan tirada badan?
Inkastoo su’ashani uu qof kastaba si uga jabaabaayo, ayaa haddana lagu kal duwan yahay fikradaha keena ama sababa furiinka .
Inkastoo markiisi hore uu guurku ku dhismay jaceel (baahi)ay labada qof ay isugu qabeen iyan guri dhistaan oo ay nolosha inta uga harsan ay si wada jir ah u qeeybsadaan ayaa hadana dadka badankiisa ku timaada guurkooda guul daro.
haddaba maxaa keena furiinka ?
Jabaabaha laga bixiyo su’aashaan ayaa aalaaba dhaliya ku kala dubanaasho xaga fikradaha ah laakiin hadii aan u soo noqono mowduuceena sabaha dhaliya furiinka soomaalida ayaan dhihi lahaa 5 shan arimood ayaa ugu waaweeyn oo kala ah:
3-kala fogaansho (lamaanaha oo laba meel ku kala noolaada).
4-faragalin ku timaada lamaanaha dhankasataba ha ahaatee.
5-Ninka oo Guursada Haweenay kale.
Hadaba sidee loo yareeyn karaa ama looga hortagi karaa furiinkaan deg dega ah ?.
Maadaama uu guurku yahay mustaqbal iyo Nolosha qaybteeda ugu muhiimsan ayaa jabaabaha laga bixiyo su’aashaan aad u fara badan yihiin aniguse kuwa kooban ayaan kasoo qaadanaayaa oo aan is leeyahay weey ugu macquulsan yihiin sida :
1-In runta leeysu sheego,runta qeeyb aad u weeyn ayay ka qaadataa dhismaha qooyska taas oo ay kalsooni ku beerto lamaanaha.
2-Balwadaha oo layareeyo amaba laga fogaado qaasatan raga balwadaha leh hadeeyba ka maarmin,in eey gurigooda ku qaataan balwadooda si ugu yaraan ay guriga uga muuqdaan oo reerku u dareemo in odaga reerka uu meesha ka muuqdo taaba wax la’aan ayay dhaantaaye,balwadu qayb libaax leh ayay ka qaadata buuqa iyo barbilowga khilaafaadka reera badan Noloshoodii Ragaadiyay.
3-Guursiga haweeneey kale,Haweenayda Caqliga badani iyada ayaa kaantarooli karta Ninkeeda iyada oo maraysa dariiqa ah in ay u samayso soo jiidasho badan iyo raali gelin ay xaga Allaah kaga helayso Ajar faro badan, diintuna in badan ayay ka hadashay Raali gelinta Ninka ay Raali gelinayso haweenaydiisu.
4-Doorka ay (reer xididku) ka cayaaraan ka hor taga furiinka lamaanaha,waa labada reer oo ay ka dhasheen ninka iyo haweehta uu qabo,reer xididku waa marjaca loo noqdo oo xaliya lamaanaha is qilaafsan sida la ogyahayna inta badan wuu hirgalaa go’aanada reer xididku.
ugu danbeentii aqristoow waxaa maqaalkayga kusookoobayaa marka hore in laga baqo Allaah taas oo qoysas badan ka badbaadin karto in uu ku yimaado bur-bur, waxaa kaloo kula talin lahaa in ay ka wada tashadaan waxkasta oo soo wajaha lamaanaha isla nool,qalad hadii uu yimaadana, si wadjir ah loo xaliyo had iyo jeerna lagu dadaalo samirka iyo dulqaadka.
Posted On: November 27, 2017 @ 4:23 pm
« Quality amateur facial mature !